आँसु लुकाएर हाँस्दैछु, तर हार्ने छैन - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
२०७४ साउन २८ शनिवार
संसारमा छोरी मान्छे भएर जन्मनु नै दोष हो । छोरी जन्मने वित्तिकै बिहे गरेर जाने सन्तानको रुपमा लिइन्छ । परिवारको सबै भन्दा जेठो सन्तानका रुपमा म पनि छोरीको रुपमा जन्मिएँ ।
एउटा केटा र एउटी केटी सँगै हिँडेको वा एक—अर्का सँग बोलेको देख्यो भने पहिलो प्रश्न त्यो केटीलाई नै गर्ने गरिन्छ । त्यो केटाको चरित्रमा खोट देख्दैनन् तर त्यो केटीको चरित्रलाई नराम्रो भनि औँल्याईन्छ । एउटा छोरा मान्छे राती—राती हिड्यो भने उसलाई केही नराम्रो भनिँदैन, तर यदि एउटा छोरी मान्छे राम्रै कामले रातको समयमा हिँड्यो भने उसलाई सारा समाजले चरित्रहिन भन्छ । यस्तो मानसिकता भएको हाम्रो समाज परिवर्तन गर्न हामी आफैले सुरुवात गर्नुपर्छ र हामी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो भनेमात्र समाज साँच्चै विकासको बाटोमा अघि बढ्नेछ । -महिला खबरबाट
डा. गोविन्द केसीको अनसन : के बन्दुक उल्टो पडकने छ ?
अथ….लुते महात्म्य, नरेन्द्रजंग पिटर उवाच